Sida loo RIP Audio CD la VLC
Laga yaabaa inaad u ordaan audio CD s on your nidaamka iyo waxa u ciyaaro iyadoo la isticmaalayo VLC Player. Waxa ugu weyn ee ku saabsan ciyaaryahan VLC waa in aad sameyn kartaa waxyaabo dheeraad ah oo la sheegay in kaliya muusiko dhegayso ama daawado filimka aad ugu jeceshahay. VLC kuu ogolaanayaa inaad waad dooxi doontaa CD maqal ah si loo badbaadiyo album aad jeceshahay aad nidaamka.
Haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo habkaani, qodobkan hubaal kaa caawin doona. Akhri si aad u fin sida aad u isticmaali karto VLC in dooxi doontaa CD maqal ah.
Qeybta 1:? Sida loo waad dooxi doontaa CD adigoo isticmaalaya audio vlc daaqadaha
Qeybta 2: Sida loo waad dooxi doontaa CD adigoo isticmaalaya audio VLC on Mac?
Qeybta 3: Isticmaalka TunesGo Wondershare
Qaybta 1aad: Sida loo waad dooxi doontaa CD adigoo isticmaalaya audio vlc daaqadaha?
1. Open VLC ciyaaryahanka iyo gelisaa CD galay disk drive computer ee. Haddaba tag in menu Media oo u furan badalo / Save doorasho.
2. Dooro tab disk hogaanka iyo guji warbaahinta u furan. Ka dhig sanduuqa CD audio disk saxday. Waxaad dooran kartaa tareenka aad rabto in aad ka dooxi doontaa CD ah. Marka aad soo xulay guji kaliya la isticmaalayo iyo Beeralay ku daadiyaa menu ugu badalo / Save.
3. suuqa kala socda, dooro caga saarka oo ka mid ah file iyo magaca. Iyadoo qoraal ah u hubiso in aad ku darto kordhin ah ee qaabka magaca. Under goobaha loo hubiyo in aad loo doortay profile ah mp3 ama qaab audio kale door bidayo in uu badbaadiyo kuwan raadkaygay ku file cd wax soo saarka.
Just Asluubta iyo aad set oo dhan!
4. Hadda riix kaliya ku bilowday button on inay waad dooxi doontaa CD maqal ah. Waxaad u helida horumarka on interface ugu weyn.
Waqtiga loo baahan yahay dooxeen CD ah waxay ku xiran tahay drive iyo baaxadda faylasha.
Habka u dooxeen cd audio on Mac ma aha in kala duwan, sida interface VLC oo kale ma wax badan bedeli. Si kastaba ha ahaatee, weli in aad qaado iyada oo loo marayo habka halkan yihiin tallaabooyinka ay tahay in la raaco on Mac.
1. Daahfurka ciyaaryahan VLC iyo geliso cd ah audio aad rabto in aad dooxi galay disk drive computer ee. Ka bilaw u socda menu File oo fur badalo ikhtiyaarka / Stream.
2. shaashadda soo socda, waxaad tagtaan dalka tab Open Media. Waxaad heli doontaa waxyaabo kala duwan si ay u dejiyaan. First dooro drive disk iyo dooro files audio aad rabto waad dooxi doontaa sidoo kale aad awoodi karto. Hadda dooro diinta doorasho ka hooseysa ah.
3. Ku qor caga file iyo magaca la kordhiyo sida file cd. Hubi in aad doorato profile saxda ah ee faylka wax soo saarka aad. Dooro hadii aad rabto in aad sida mp3 cd ama qaab kale.
4. Marka aad samaysay oo dhan goobaha, guji kaliya ku bilowday si loo bilaabo nidaamka.
Waxaad ka arki kartaa file cd aad ugu caga siiyey on your Mac.
Qeybta 3: Isticmaalka Wondershare TunesGo
Haddii aad rabto in aad ku darto album farshaxanka iyo abaabulo, aad music ku saabsan habka Wodnershare TunesGo waa software weyn si ay u isticmaalaan. Waa ku dari kartaa maqan info in files music aad si sahlan, oo u oggolaan doonaa in aad habayso oo dhan track . Waxaa ka mid ah qaababka sida ku daray fanka album, tirka files nuqul iwm Wixii faahfaahin dheeraad ah, waxaad ka fiirin kartaa goobta Wondershare ah.
> Resource > Music > Sida loo RIP Audio CD la VLC?